लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश ! « Lokpath
२०७६, २० चैत्र बिहीबार १०:४७
लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश !
प्रकाशित मिति : २०७६, २० चैत्र बिहीबार १०:४७
काठमाडौं । फिलिपिन्समा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश दिइएको छ । राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेले लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश दिएका हुन । राष्ट्रपति डुटर्टेले टेलिभिजनको सम्बोधनमा प्रहरी र सेनाका अधिकारीलाई गोली हान्ने आदेश दिएका हुन ।
‘लकडाउनको अवधिमा कसैले झगडा गर्छ र तपाईंको ज्यानलाई खतरा हुने स्थिति निम्त्याउँछ भने उनीहरुलाई गोली ठोक्नुहोस्’ राष्ट्रपतिले सम्बोधनमा भनेका छन् । सरकारसँग खाद्य सहायताको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने मनिलाको क्युजन सिटीका २१ जनालाई पक्राउ गरेपछि डुटर्टोले यस्तो आदेश दिएका छन् ।